डायरी | samakalinsahitya.com
- शम्भु सुस्केरा
उ आज पनि हातमा डायरी बोकेर हाकिमको ढोकामा उभिएको छ ।
के हो प्रमोसनको लागि भन्न लागिस कि माल आउने ठाउँमा सरुवा माग्न लागिस् ? यसरी जिस्क्याउँछन् देख्नेहरु ।
उ मुसुक्क हाँस्छ मात्र केही बोल्दैन ।
तर उसको मन भने बोलिरहेको हुन्छ तिमीहरु जस्तो लोभी र चाकडीबाज हो र म ? म त साहित्यकार हो । साहित्यको सेवा गर्ने मान्छे । हाकिम र मेरो बिचार मिल्छ दुवै साहित्यप्रेमी भएको नाताले ।
संझना गर्छ ऊ—हाकिमले साहित्य सिर्जना गरेपछि घण्टौं सम्म मलाई सुनाउँछन् ।
तर उ खिस्रिक्क पर्छ तुरुन्तै ।
उसको हाकिमले त उसको रचना कहिल्यै सुनेको छैन । उसले सुनाउने प्रयास नगरेको पनि होईन । तर हाकिमले सधैं बेफुर्सदी देखाउने र सुनेको नसुनै मात्र गरे । तै पनि उ निरास भने छैन । न त हाकिमले बोलाएका बेला रचना सुन्न नजाने आँट नै गर्न सकेको छ ।
ए सुब्बा साब ल यता आउनुस ।
हाकिमले यति भन्नासाथ दौडेर हाकिमको कार्यकक्षमा पुग्छ , अभिवादन गर्छ र उभिरहन्छ । हाकिमले बस्ने इसारा गरे पछि नजिकैको कुर्सीमा बस्छ । ल हिजो राति मलाई एउटा कथा फुरयो भन्दै गोजीबाट एउटा पेपर निकालेर सुनाउन थाल्छ । ध्यान दिएर सुन्छ ऊ । सुनाइ सकेपछि सोध्छन् हाकिम—कस्तो लाग्यो त सुब्बा साब ? सुन्दै जाँदा धेरै ठाउँमा कमेण्ट गर्न मन लागेको थियो तर गरेन । भन्यो—एकदम राम्रो छ सर,मन छुने खालको छ । प्रसंशा गरयो । हाकिम पनि जुँगा बाङ्गा पार्दै मुसुक्क हाँसेर पेपर गोजीमा हाल्छन् र बोल्छन् यस्तै लेख्दै गइयो भने त एक दिन राम्रै लेखक बनिएला ।
हाकिमको यो मुडमै मौका छोपेर पकेटबाट एउटा पेपर निकाल्यो र हाकिमतिर आशातित अनुहारले हेर्दै बोल्यो–सर मैंले पनि निकै दिन अघि लेखेको एउटा कविता थियो हजुरलाई फुर्सद नभएर....उसले आफ्नो कुरा भनि सक्न नपाउँदै हाकिम बोले ओ हो सुब्बा साब मलाई हतार भई हाल्यो मिटिङ्ग सुरु हुनै लाग्यो मिटिङ्गमा गएर आई हाल्छु । यति भन्दै उठेर बाहिर निस्के । उ गजधम्म भएर त्यही बसिरहयो ।
प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : शुक्रबार, 16 बैशाख, 2068
मैंले देखेको सपना